Qaar kamid ah Isbitaalada Minnesota oo xayiraad booqashada ah lagu soo rogay -
Photo credit: Amy Forliti / AP
Cudurka Jadeecada ee sii fidaya ayaa sababay in xayiraad lagu soo rogo dadka soo booqanaya qaar kamid ah Isbitaalada Minnesota.
Isbitaalka weyn ee Allina ayaa maanta ku dhawaaqay in ay xanibaad ku soo rogayaan, xadna u yeelayaan dadka soo booqda xarumahooda caafimaad. Isbitaalka Allina ayaa xanibaadan sabab uga dhigay jadeecada Minnesota ka dillaacay.
Tirada dadka laga helay cudurka Jadeecada ayaa hadda maraya 44 qof. Xanibaada la xiriirta booqashada rugta ama xarumaha caafimaad ayaa inteeda badan saamayn ku yeelanysa goobaha caafimaad ee lagu daweeyo carruurta.
Rugta Caafimaad ee Allina ayaa ku tallo jirta in ay yareyso martida soo booqanaysa isbitaallada iyo xarumaha caafimaad ee ay iyagu maamulaan.
Allina iyo dhamaan xarumahooda daryeelka caafimaadka ayaa sheegay in laga bilaabo maanta oo ah Isniin, 8, bisha May, 2017 in ay ku dhiirigelinayaan waalidiinta in ayna keenin isbitaalka carruurta da’doodu ka yar tahay 5 sano jir. Looma ogola carruurta 5 sano jira iyo wixii ka yarba in ay soo booqdaan isbitaalada, xitaa haddii ay raadinayaam daryeel caafimaad.
Sidoo kale, dhammaan carruurta da’doodu ka yar tahay 11 ayaa la weydiin doonaa in ay xirtaan maasgaro afka iyo sanka loogu tallo galay, marka ay soo booqdaan xarumaha caafimaadka ee Allina ama isbitaalada.
Intaa waxaa dheer, qof kasta oo qaba qufac ama dhuun xanuun ayaa iyagana laga codsaday in ay xirtaan maasgaro afka iyo sanka lagu daboolo marka ay soo booqdaan isbitaallada iyo xarumaha caafimaad.
Haddaba cudurka Jadeecada ee ka dilaacay gobolka Minnesota ayaa dadka uu ku dhacay waxaa u badan carruur Soomaaliyeed, ilaa iyo haddana tirada dadka la soo dhacay cudurkan ayaa sii kordheysa maalinba maalinta ka dambeysa.